I-China Balcony Glass Window Ares80-1 ifektri nabaphakeli | Kinzon
I-Balcony Glass iyingxenye ebalulekile yamakholoni amaningi. Bandisa ukugeleza kokukhanya ngaphezu kokwenza i-balcony ibukeke iyinto yesimanje futhi yemukelayo. Njengoba kwenzeka nge-Glass railing kanye ne-Glass Filing, i-Balcony Glass idinga ukwenziwa ngokuvamile kusuka ngezinto ezithile futhi kusetshenziswe izindlela ezikhethekile zokukhiqiza ingilazi Ephephile Engilazi. Ingilazi izodinga ukushintshwa ngesikhathi sezingozi, ukulungiswa kanye nokuqedwa kokwakhiwa.
Iwindows yengilazi yeBalcony-Ares80-1
Iwindi lengilazi yeBalcony
Kunephrofayili yokulandelela isitebhisi ukugwema amanzi nothuli lwewindows yengilazi yeBalcony
Kunezinga elikhulu lokulula nesitayela ekusebenziseni iwindi lebhaluni le-balcony. Idizayinelwe ukuphelela okuhle kakhulu, i-balcony ingilazi yewindowsAres80-1 ivumela umoya omusha ungene ekhaya lakho nje ngesiphepho esisheshayo se-sashes. Igumbi lingacishe libe ubufakazi obuzwakalayo futhi lihlukaniswe nokungcola kwangaphandle lapho kuvaliwe.
I-balcony ingilazi iwindiAres80-1 ifaka ama-sashes amabili noma ngaphezulu athe tyaba abekwe kuthrekhi enama-roller ukuze ahambise noma alayitheke eceleni kwendlela. Ngokuhamba okugcwele kwama-sashes kusuka komunye umkhawulo kuya komunye umkhawulo, iwindi linikeza isikhala esikhulu somoya omncane. Noma ngabe kuvulandi wakho, amakamelo okulala noma amahholo amakhulu, iwindi le-balcony ingilaziAres80-1can liqonde ngqo ngaphakathi futhi lengeza isitayela salo sanamuhla sekhaya elikhanya ngamehlo.
YINI EZIPHUMA KANYE IZINZUZO ze-Balcony ingilazi yewindowsAres80-1:
1. Itholakala ngemibala ehlukahlukene nemiklamo
2. Imikhiqizo eyenziwe ngezifiso yokuvula okukhulu
3. Ukushisa okuhle, umsindo nokufakelwa uthuli okunophawu olunamandla lomoya
4. Multipoint Ilokhi uhlelo ngesicelo
5. Inketho yeglasi kabili nelilodwa
6. Ithrekhi yemvula nositha ukugwema i-setha lamanzi emvula
Esedlule: I-Aluminium Bi-folding Window Ares75FT
Olandelayo: Iwindows Sliding neMosquito Net Ares80-1
I-Aluminium Glass Window
I-Aluminium Sliding Window
I-Aluminium Sliding Window Ne-Net
Iwindows Sliding neMosquito Net Ares80-1